Intel Power Gadget, zvakare inowanikwa ye macOS | Ndinobva mac
Nguva yega yega kana chinhu chenhau chinobva kuIntel chikabuda munguva dzichangopfuura, zvinogadzira tarisiro, kunyangwe mune ino kesi yanga ichingova kubviswa kwenguva pfupi nezve kurodha pasi kwechikumbiro icho Intel chaanacho, kuongorora ma processor.
Iyi vhiki yapfuura Simba reGadget kurodha pasi rakanga risingasvikike kubva papeji reIntel. Icho chiratidzo chechiratidzo cheMacOS chinotizivisa nezve mashandiro nguva dzese dzebasa revashandisi vedu veMac. Iko kunyorera kwakanyangarika kubva kune yayo saiti saiti.
Panguva ino zvikonzero hazvizivikanwe, kunyangwe zvingangoita kuti inopindura zvikonzero zvekuchengetedza kana kusashanda kwepeji panguva iyoyo. Mushure mekumisazve iyo application, tinozviona izvozvo iyo macOS vhezheni yawana gadziriso diki kubva mushanduro 3.5.2 kusvika 3.5.3. Izvo zvinoita sekunge kuti mamwe mavhezheni, ese eWindows neLinux, akagadziridzwa.
Makuhwa anoratidza izvozvo Kufungidzira kuti vakomana vanobva kuIntel vanozoona rimwe dambudziko rekuenderana neMacBook Pro nyowani ya2018, senge nyaya dzine chekuita nekuita calibration.
Vhiki rapfuura takakuudza iyo 2018-inch MacBook Pro 15 yekuita nyaya neI9 processor, iyo yaipa matambudziko ekuita nekuda kwetembiricha yakakwira yavakasvika. Aya maedzo akaitwa nePower Gadget uye izvi zvinoita kunge chimwe chezvikonzero nei Intel yabvisa chikumbiro chekuwongorora kana kuongorora kuti dambudziko iri raiitika chaizvo.
Nezve nyaya dzekuita, zvakaoma kunzwisisa kuti Intel neApple havana kuita bvunzo dzakanyanya neiyo nyowani i9 processor. Izvo zvakare zvinogona kunge kuti mamwe mapurosesa matsva anogona kukonzera matambudziko, kana kupa zvakashata mhedzisiro kana uchiyera iyo data.
Kuti umhanye Power Gadget, unoda macOS High Sierra. Sezvazviri mune chero zvazvingava, tinokukurudzira kuti ugadzirise izvi uye zvese zvekugadziridza zvekushandisa kuti usave nematambudziko akatoonekwa nevakagadziri
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Intel Power Gadget, zvakare inowanikwa yeMacOS
Voice sahwira, chishandiso chitsva kunyora izwi